Arjantiin oo laga badiyey iyo Messi oo la ganaaxay - BBC News Somali
Arjantiin oo laga badiyey iyo Messi oo la ganaaxay
Image caption Bolivia 2-0 ayey ku badisay
Xulka qaranka ee Arjantiin ayaa laga reebay u soo bixidda tooska ah ee koobka k/cagta adduunka, ka dib markii Bolivia ay 2-0 uga badisay.
Guul darradan ayaa timid saacado ka dib markii kabtanka kooxda, Lionel Messi, laga mamnuucay 4 cayaarood inuu xulka u cayaaro, ka dib markii lagu eedeeyey inuu garsoore aflagaadeeyey, cayaatii ay goolka kaga badiyeen Chile Khamiistii.
Juan Carlos Arce iyo Marcelo Martins ayaa labada gool u dhaliyey Bolivia, halka Ramiro Funes Mori oo u cayaara kooxda Everton iyo xulka Arjantiin Bareello looga qaaday garoonka, ka dib markii uu dhaawac jilibka ka soo gaaray.
Image caption Ramiro Funes Mori Jilibka ayuu ka dhaawacmay
Arjantiin waxay iminka ku jirtaa kaalinta 5aad, Messi-na wuxuu ka maqnaan doonaa seddexda cayaar ee kooxdu la yeelan doonto Brazil, Uruguay iyo Venezuela dabayaaqada sannadkan.
Arjantiin waxaa lagu wdaa in ciqaabtaas ay racfaan ka qaadato.
Afarta kooxood ee ugu sarreeya Ameerikada koofureed ayaa toos ugu soo baxaya koobka k/cagta adduunka ee xagaaga dambe ka dhici doona Ruushka. Kooxda kaalinta 5aad gasha ayaa cayaar lug-hore iyo lug-dambe ah la yeelan doonta kooxda ka soo baxda guruubka Oceania.